AQOONSIGA DABEECADAHA CAANKA AH EEYAHA - EEYAHA
Aqoonsiga Dabeecadaha Caanka Ah Eeyaha
Liiska dabeecadaha ugu badan ee ku dhici kara eeyaha (liiskan wali ma dhameystirna)
Ka sokow wax iska cad ilaalin , oohin iyo qaniinyo, eeyo badan ayaa soo bandhiga dabeecado kaladuwan oo kaladuwan oo badanaaba aan laga aqoonsan aadanehooda. Eeyadu aad ayey u yartahay inay soo bandhigaan heerka ugu sarreeya ee xukunka habeennimo. Badanaa waxaa jira astaamo u horseedaya sanado badan eeyaha alfa ee xukuma had iyo jeer ma cabaadaan oo qaniina. Haddii milkiilayaashu eyga siiyaan waxa uu doonayo, mararka qaarkood ma jirto sabab eygu u ciyo ama u qaniino mooyee in laga hor yimaado mooyee. Eeyadu waxay fahamsan yihiin inay ku dhex jiraan duni aadanaha. Iskusoo wada duuboo, yaa iyaga cunto siiya oo albaabka uga fura iyaga inay dheri galaan? Markuu aadamuhu ku fuliyo shaqooyinkaas dalabka eyga, in kastoo, muxuu eeyu u maleyn waayey inuu yahay hoggaamiyaha? Way u fududahay eeyaha inay helaan aragti ah inay alfa ku jiraan xirmooyinkooda. Maaddaama dabeecado badan oo alfa ah aan laga aqbali karin bulshada aadanaha, tusaale ahaan, qaniinyada, waxaa muhiim u ah aadanaha in ay ku sii hayaan hoggaankooda eeyahooda.
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah dabeecadaha caadiga ah eeyaha ay soo bandhigaan markay rumaystaan ​​inay ka sarreeyaan aadanaha. Maskaxda ku hay in eeyga uusan u baahnayn inuu soo bandhigo dhammaan dabeecadahaan si uu ugu jiro qaab maskaxeed. Mararka qaar eeyga alfa wuxuu soo bandhigi doonaa oo kaliya dhowr dabeecadood waqtiyo aan kala sooc lahayn, iyadoo kuxiran waxa eygu go'aansado inuu dareemo sida sameynta daqiiqad kasta. Eeyaha caqliga badan waxay u muuqdaan inay la tartamayaan amarka xirmada in ka badan eeyaha celceliska ama caqliga hooseeya.
Madax adag oo kas ah
Ku riixitaanka toy ama kugu dhejinaya si aad adigu ula ciyaarto
Kuuguulanaya in laguu duceeyo
Fadhiga meelaha dhaadheer, wax walbana hoos u eeg
Aadanaha ka ilaalinaya dadka kale ee ku soo dhowaanaya. Dadku waxay jecel yihiin inay ugu yeeraan “ilaalin” laakiin dhab ahaan waa “sheegasho” - eey adiga ayaa leh.
Xanaaqa ama ku cabaada bini-aadamka oo milkiileyaal badani u tixgeliyaan 'hadlaya' (amar la'aan in la sameeyo).
Qaylo qaylo dheer oo lagu mudaaharaadayo wax eey uusan rabin inuu sameeyo.
Ku boodid ama cagaha dhigista bina-aadamka (amar la'aan sidaas).
Ku adkaysiga ku xirnaanshaha shay qaas ah markii lagu weydiisto inuu iska joogo (eyga ayaa iska leh)
Adkaysiga ku saabsan ka bixitaanka iyo ka bixitaanka albaabbada aadanaha hortiisa
Adkaysiga ku saabsan socodka dadka hortiisa iyadoo hogaan loo socdo
Adkaysi ku saabsan marinka albaabka marka hore
Diidmada inaad ku socotid leedh (waxaa ka reebaysa eey yaryar oo aan tababbaran, eeyaha qaba dhaawacyo ama cudurro)
Dadka oo la salaaxo marka ay baxayaan (Eygu ma uusan oggolaan inuu baxo)
Ma dhageysanayo amarrada la yaqaan
Ma jecla dadka taabashada cuntadooda
Isaga oo ku faanaya dhabta aadanaha
Adkaysi ku saabsan inaad dusha sare ahaato, ha ahaato laab ama cagta cagta
Ku adkaysiga meesha ay seexdaan, yacni barkin
Xanaaq haddii la carqaladeeyo intaad seexanayso
Waxay jeceshahay inay ku seexato dusha sare ee aadanaha
Lick (siinta dhunkasho) si go'an oo feejignaan leh
Iyagoo wata socod isla weyni ku dheehan tahay, madaxana kor loo taagay
Ma jecli in keligaa lagaa tago oo aad ugu faraxsanaado soo noqoshada bini'aadamka (eeg Walaaca Kala-baxa eeyaha )
Kaliya fiirinta eeyga iyo sida uu naftiisa u qaado ayaa kuu sheegi kara maskaxda maskaxda eeygu kujiro. Tusaale ahaan, eey xukuma ayaa socon doona meel sare oo isla weynaan leh, isagoo iskala faanaaya inta uu kari karo Wuxuu naftiisa ku qaadaa wax umuuqda sharaf u ah isha aadane ee aan la barin. Jirka si adag ayaa loo qaadaa, dabada ayaa kacsan oo adag, dhegaha ayaa feejignaan leh.
Mawqifka Isu Taaga
Eeyaha u hoggaansamaya, dhanka kale, waxay isku qaadaan qaab ka soo horjeedkeeda. Waxay hoos u dhigayaan madaxooda, garbaha hoos, dabo hoos, iyagoo naftooda yar yar. Isha aadanaha ee aan tababaran waxay umuuqataa ey eey adeecdo inay eey murugo badan tahay. Maaha sidaas, mowqifka eeyahaas is-hoos-joogaya ayaa u sheegaya dhammaan hareerahooda inaysan rabin inay cidna la tartamaan. Waxay ku yimaadaan nabad. Eeyadu waa 'la dagaallamaan' xayawaanka, taas oo macnaheedu yahay habka difaaca dabiiciga ahi waa inuu la dagaallamo markii loo hanjabo. Taasi waa sababta ay si cad ugu muujiyaan marka aysan rabin inay dagaallamaan ama marka ay dagaallamaan.
Maaddaama eyda xukuma ay u muuqdaan kuwo isla weyn oo, dhammaanteen waa inaan qirno, quruxsan, haddii aadan ogeyn waxa eygu runti dhahayo, eeyaha is-hoosaysiiyaana waxay umuuqdaan kuwo murugaysan maaddaama ay madaxooda hoos u dhigayaan oo ay hoos isu dhigayaan, layaab ma leh dad badan ayaa leh eeyo xukuma. Marka eygoodu u dhaqmo adeecid waxay ku qaldaan taas eey murugo leh. Markuu eeygu ficil celiyo waxay ku qaldamaan eey faraxsan, sharaf leh. Xukunka ayaa u muuqda in la abaalmariyo.
Ka Baqo Gardarada
Labrador-kan jaallaha ahi wuu ciyey oo si bayaan ah ayuu ugu qaylinayey marwo. Eyga ayaa hal mar ku xanibay gabadha geeska garaashka ilaa mulkiilayaashu ay awood u yeeshaan inay u yimaadaan oo ay ka wacaan. Dadka badankood waxay ku qaldaan habdhaqankan inay yihiin awood-dagaal, laakiin haddii aad eegto luuqadda eyga waxaad ogaan doontaa inay ka duwan tahay Chihuahua ee kor lagu muujiyey. Eyga dabadiisa ayaa hoos u dhacaya oo xoogaa dhejis ah. Dhegaha ayaa soo laabtay halkii horay loo sii wadi lahaa. U fiirso sida eygu wax yar gadaal ugu janjeerayo, halkii uu horay uga sii socon lahaa. Labrador-kani waa mid aan kalsooni lahayn oo baqdin leh waxayna barteen inay wax ka qabtaan dareenkaas iyagoo u dhaqmaya si gardarro ah. Eygan ayaa wali laga yaabaa inuu qaniino bini aadamka cabsi darteed, laakiin sababaha dhaqankeeda uma eka mid eey ku kaca fal gardarro ah awoodiisa.
Emiliano oo sideed jir ah 'hanashada socodkiisa' Darley the Beagle mix
Eeyadu waxay leeyihiin dareen tahriib ah iyo dareen uu hoggaankoodu hoggaamiyo. Barida eey si ay ugu ciribtirto leedhka waa habka kaliya ee ugu wax ku oolka badan ee lagula xiriiro yaa ah hogaamiyaha xirmadaada. Eeyaha ayaa ugu farxadda badan markay aamin ka noqdaan amarka xirmada. Aadanaha ayaa ugu farxadda badan marka eeyahoodu dabcaan oo ay ixtiraamaan agagaarkooda. Marka eeyaha loo oggol yahay inay ku hor socdaan bini'aadamka iyagoo hogaaminaya, waxay u sheegaysaa iyaga inay ka sarreeyaan aadanaha nidaamka. Marka amarka baakadka aan la caddayn wuxuu keenayaa eeyaha walwal iyo walaac badan. Miyaad socod baratay eeygaaga?
Eeyaha-Yar-Yar / Qiyaastii u Dhexeysa illaa 20 Pound (9 kg)
Eyda Dhexdhexaad / Qiyaas ahaan udhaxeysa 20-50 Pound (9-23 kg)
Eeyo waaweyn / Qiyaas ahaan udhaxeeya 50-100 Pound (23-45 kg)
Eeyo waaweyn oo dheeri ah / Waxay ka badnaan karaan 100 rodol (45 kg)
midabada spaniel ee cocker american-ka midab saddex-midab ah
pictures of hamsters cusub dhashay
jilicsan iyo isku dhafka dane weyn
weyn masso mastiff buuxa koray